Warbixin ku saabsan Kalluunka Xeebta Laaqoray ee Gobolka Sanaag | maakhir.com
March 22, 2008 in General
Laasqoray:- Ka ganacsiga Kalluunka ayaa aad ugu soo badanada suuqyada waa wayn ee Dalka Somaliya iyada oo ay muhiim tahay Cunida kalluunku oo ay ku jirto Nafaqo Badan,ayaa hadana waxa laga dareemaa Dalka Somaliya qaabka looga faaiidaysanyo Kaluunka, Magaalooyinka ugu badan ee inta badan laga soo daad gureeyo Kalluunka ayaa ah Magaalada Tariikhiga ah ee Laasqoray.
Somalia ayaa leh xeebta ugu dheer Afrika oo dhirirkeedu gaarayo 3,025km, kheyraadka bada sida kaluunka ayaa ganacsigiisa iyo cunidiisa aad u kordhay sanadahan danbe, dhamaan dadka ayaa moodaa inay aad u fahmeen siidii Dalka looga la soo bixilahaa Khayraadka ku jira.
Waxaa aad u kordhay qiimaha cuntada aduunka oo dhan gaar ahaan waddanka Somalia, Kaluunka waxa uu ka mid yahay cuntada ugu raqiisan nafaqadiisana ay aad u badan tahay.
Weriyaha Shabakada LaasqorayNet ayaa magaalada xeebta ah ee Laasqoray waxa uu kula kulmay Axmed Jaamac (tima Cade)oo muddo dheer ganacsiga kalluumeysiga ku hawlannaa noocyada kalluunka Laasqoray laga ganacsado,isaga oo aad uga warbixiyay qaabka ay uga jilaabtaan Xeebta markay la soo baxayaan Kaluunka.
Khabiirkaasi Kalluunka ku xeel dheer ee jooga Magaalada Laasqoray ayaa sheegay inuu Kalluunku haatan aad u fiican yahay oo ay soo jilaabaan kalluun badan isaga oo aad ugu nuux- nuuxsaday in Xeebta Magaalada Laasqoray lagu tiriyo inay saka hore kaga jirto Aduunka dhulka ugu kalluunka Badan.
C/risaaq Axmed Maxamed waxaa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee horey badeecadahooda uga soo degsan jirey dekedda Mombasa, haatanna u wareegey dekedda magaalada Daressalaam,isaga taasi sabab uga dhigay rabshadii dhawaan ka dhacay Dalka Kenya.
C/risaaq waxa uu sheegay in Kalluunka uu ka Ganacsado looga keeno Dalka Somaliya gaar ahaan Magaalada Laasqoray isaga oo sheegay inuu aad ugu xidhan yahay kalluunka warshada Laasqoray ay farsamayso, ganacsadahaasi waxa kaloo uu intaasi ku daray in Geeska Afrika inta badan uu ku leeyaha Gooba Ganacsi oo u iib geeyo Kalluunka laga keeno Dalka Somaliya gaar ahaan Magaalada Laasqoray.
Magaalada Laasqoray ayaa waxa ka dhisan Ilaa Lama warshadood oo soo saara Kalluunka kuwaasi oo mid ka mid ah ay tahay mid aad u balaadhan oo ay ka shaqeeyaan Ilaa 350-Ruux oo isugu jira Haween iyo Rag,iyada oo ay warshadaasi Kalluunkeeda loo iib geeyo Dalalka Dibada.
Waxa jirta warshad kale oo aad iyana u baalaadhan taasi oo iyana Kalluunka u farsamaysa qaab kale oo taasi ka duwan,warshadaasi waxay kalluunka uga Farsamaysaa Qaabka loo yaqaan Qalinjinta iyada oo dabadeedna u iib gaysa Dalka Dibadiisa waxan la sheegay inay ka shaqeeyaan Boqoolaal shaqaale ah,warshadaasi ayaa la xusi karaa inay leedahay Qalab u gaar ah oo ay kaga soo jilaabato Xeebta.
Waxa jira qaab kale oo Kalluumaysatada Degmada Laasqoray ay uga Ganacsadaasn kalluunka kuwaasi oo markay soo jilaabaan kalluunka Qalijiya iyaga oo ku habeeya qalab loogu talagay waxana loogu Magcaabaa Noocaasi kalluunka ah( Xaniid)
Madanaa Indhahaagu waxay qabanayaa Doonyo yar yar iyo Saxiimadu kuwaasi oo aroorta hore Dhex mushaaxaya Badwaynta Laasqoray,iyaga oo shabaagta dhiganaya badhtamaha Xeebta si ay u jilaabtaan Kaluunka.
Dadka ku xeel dheer arimaha Kalluunka ayaa noo sheegay in wakhtigan haatan la joogo uu kalluunku soo caaryo isla markaana aad looga Faa iidaysto, Reer Laasqoray waxa kaloo noo sheegeen inay jiraan Gudi ay samaysteen Kalluumaysatada Deegaanka Laasqoray kuwaasi oo ku bahoobay Urur, waxa sheegeen inuu Ururkaasi wax wayn ka taro qaabka shaqadooda.
« Dooni sida Qalabka laga sameeyo Lacagta Faalisada ah ayaa Taagan Dekeda Magaalada Bosaaso
Puntland ayaa Dalbatay in la dhiso Maamul Goboleedyo Horle »